Akanakisa eWordPress plugins eBhizinesi Sites Martech Zone
Wednesday, May 25, 2022 Chitatu, June 15, 2022 Douglas Karr
Kumwe mukurumbira weWordPress plugin kwave kuchifambiswa neako kana mutengi-akavakirwa kuisa. Zvakadini nebhizimisi? Takaisa pamwechete rondedzero yedu kufarira WordPress plugins izvo zvatinotenda zvinogonesa vashandisi vebhizinesi kutora mari pane zvavo uye kutyaira mhinduro kuburikidza neinjini dzekutsvaga nemagariro midhiya, kuburikidza nenharembozha, piritsi kana desktop… uye kunyatsobatanidza nzira dzavo dzemagariro nemavhidhiyo.
Sezvo ndagadzira mamwe akakurumbira WordPress plugins, ini ndinogara ndichifarira kutsvaga uye kugovera plugins anoita basa rinoshamisa kusimudzira, optimize, uye otomatiki mabasa mukati meWordPress. WordPress plugins zvese chikomborero uye kutukwa, zvakadaro.
WordPress Plugin Matambudziko
Mapulagi dzimwe nguva anoenda maburi ekuchengetedza kuti vabiridzi vanogona kutora mukana wekusundira malware pane yako saiti.
Mapulagi kazhinji haashandise zvizere iyo WordPress coding zviyero, ndichiwedzera zvisina kufanira kodhi iyo inogona kukonzera dzimwe nyaya.
Plugins anowanzo zvisina kugadzirwa, zvichikonzera zvemukati dhata kana nyaya dzekuita.
Plugins anowanzo haina kutsigirwa, Kukusiya uine kuvimba nekodhi inogona kukura kubva kuchinyakare uye yoita kuti yako saiti isabatsira.
Mapulagi anogona kusiya matani e data mune yako database… Kunyangwe mushure mekunge wabvisa iyo plugin. Vagadziri vanogona kugadzirisa izvi, asi kazhinji usazvidya moyo nezvazvo.
Ini ndinotenda WordPress yakanyatsokwira kumusoro, ichipedza mapulagini ekare kubva pakuona mune yavo plugin repository uye nekuzobvumidza matsva plugins nemaoko kuti vaone kuti haana kunyorwa zvakanyatsonaka. Sezvo unozvibata wega WordPress zviitiko zvinokutendera iwe kuti uise chero chero plugin, zvakadaro, iwe unofanirwa kuita rako rekuchikoro kana kuwana inovimbwa sosi yekuita kurudziro.
Pamusoro pezvo, mazhinji e Akanakisa eWordPress plugins Rondedzero akarongedzerwa kune wega blogger uye haatarise kumabhizinesi uye nekuedza kwavo kwakasiyana mukugadzira nekugadzira matipi emukati anobatsira kusimudzira bhizinesi ravo. Uyezve, isu tose tinoziva izvozvo yakanakisisa itemu inomiririra… saka tichaenda nevanoda kusiyanisa zvatinokurudzira.
Pazasi pane yakaedzwa uye yechokwadi seti ye WordPress plugins ebhizinesi iyo yatinotenda ndiyo yakanakisa munzvimbo yakakura yeiyo WordPress plugins.
Favorite WordPress plugins yekubatanidza uye Shandura Vashanyi
ChiitikoON - Kana iwe uri kutsvaga kuwedzera zviri nyore zviitiko, kunyoreswa, munzvimbo dzakawanda munzvimbo yako yeWebhusaiti saiti, iyi plugin inonyatsotsigirwa uye ine toni yezvinhu.
giravhiti Forms -Kurumidza uye nyore kuvaka-fomu ine dzakasiyana siyana dzekugadzirisa sarudzo dzakabatanidzwa zviri nyore neyechitatu-bato masevhisi sePayPal, Mailchimp, AWeber, nevamwe. MaAdd-ons uye API aripo kuti awedzere kushanda. Kana uri kushandisa Elementor Pro, haudi kuitisa sezvo maFomu ari maficha acho.
Simbisa & Govana - plugin yekuburitsa mameseji uye kuigovana kuburikidza neTwitter neFacebook nemamwe masevhisi anosanganisira LinkedIn, Email, Xing, uye WhatsApp. Kune zvakare yakavakirwa-mukati Gutenberg block iyo inobvumidza vashandisi vako kuDzvanya Kugovana.
OptinMonster - Gadzira kutarisisa-kutora mafomu-anotendeuka anoshandura vashanyi kuva vanyoreri nevatengi. Sarudza kubva popups, inoyerera tsoka tsoka, slide-ins, uye vamwe kugadzira yako yekupinda-fomu mune 60 masekondi akati sandara.
Jetpack - Jetpack inoramba ichivandudza pamwe neshanduro dzemahara uye dzakabhadharwa dzinowedzera kugona kweWebhusaiti yako saiti. Zvinhu zviviri zvakakosha zvandinotenda ndezvekudyidzana kugovana kugona uye kunyorera kuburikidza neemail zvinowedzera. Iko kune toni yezvimwe zvinhu, zvakadaro! Kupfuura zvese, iyi plugin inogadzirwa neAutoattic saka iwe unoziva kuti yakanyorwa uye inochengetwa kune epamusoro matanho
WooCommerce - inonyanya kufarirwa eCommerce chikuva chekuvaka chitoro chepamhepo. Woocommerce inotsigirwa zvizere netoni yezvinowedzera uye plugins nechikwata kuAutoattic, ivo vanogadzira WordPress.
Favorite WordPress plugins yekunatsiridza Yako WordPress Administration
Zvirinani Kutsvaga Tsiva - pane nguva dzaunoda kumhanyisa kutsvaga / kutsiva pane dhatabhesi yezviri mukati, zvinongedzo, kana mamwe marongero. Iyi plugin isarudzo huru yekuita izvozvo.
Disable Comments -Maonero aimbove ekubatsira kukuru kune ese ari maviri ekutsvaga masanji uye nekuita vashanyi vesaiti yako; zvisinei, mumakore achangopfuura mashoko e spamming ave anenge asingatarisike uye hurukuro yakatamira kumatanho ezvenhau. Iyi plugin ichadzima zvese zvine chekuita nekutaura uye kubvisa zvikamu zvekutaura kubva pakuburitswa pasaiti yako. Iwe unogona zvakare kudzima zvese zvakaburitswa makomendi.
Dhinda Post - kana iwe uchizoda kudzokorodza zvirimo, iyi plugin inopa kutonga kusingagumi pamusoro pekuti ndeapi mabasa anogona kutevedzera zvirimo, izvo zvinhu zvinodzokororwa, nezvimwe.
Google Tag Manager weWordPress - gadzirisa zvese zvako zvekuwedzera zvinyorwa uye zvimwe zviito kubva kuGoogle Tag Manager. Iyi plugin yakanangana neWordPress uye inopa tani yesarudzo.
Post Chinyorwa Yakaratidzwa Mufananidzo - anowedzera iyo Featured Image column mune admin zvinyorwa uye mapeji rondedzero. Inoita kuti vatariri vaone kuti ndeapi mapositi kana mapeji ane akaratidzwa mufananidzo akaiswa.
Kurumidza Kugadzira Kuwana - Uri kutarisira zvakawanda zvemadhodhi here? Kana zvirizvo, iyi plugin inoisa ipfupiso yakanaka mune yako admin menyu iyo inounza iwe zvakananga kune ako madhirezi (pamwe nekuratidzira kuverenga).
Saiti Kit neGoogle - iyo-yekumira mhinduro yekuisa, maneja, uye kuwana maonero kubva kune akakosha maGoogle zvishandiso kuita kuti saiti ibudirire pawebhu. Inopa zviremera, zvepamusoro-zve-zvezviitiko kubva kune akawanda maGoogle zvigadzirwa zvakananga paWordPress dashibhodhi kuti uwane nyore, zvese zvemahara.
Kwechinguva Kupinda Pasina password - pane dzimwe nguva dzaunoda kupa dingindira kana plugin yekuvandudza nekuwana kwenguva pfupi kune yako WordPress muenzaniso… asi haugone kuita kuti vanyorese uye vawane mapassword kuburikidza neemail. Iyi plugin inopa yakananga, yechinguva chinongedzo chavanogona kushandisa kupinda musaiti yako kuti ikubatsire. Iwe unokwanisa kuseta nguva yekupera zvakare.
WP Mail Log - kana iwe wakambozvibvunza kuti kana maemail ari kutumirwa kubva kune yako saiti kuburikidza nePHP kana SMTP, WP Mail Log Iri rakakosha plugin yekutevera yako inobuda mameseji.
WP All Import -Inoshamisa inoshanduka muunganidzwa wemaplugins ekupinza uye kutumira kunze data kubva kuXML uye CSV mafaera kupinda nekubuda muWordPress uye akati wandei anozivikanwa plugins.
Favorite WordPress plugins for Layout uye Editing
Yepamberi Yakapfuma Zvinyorwa Zvishandiso zveGutenberg -Kana iwe uchida mamwe masitaera muiyo default Gutenberg edhita neWordPress, kusanganisira kodhi, subscript, superscript, inline mavara, uye kumashure kwemavara editing… iyi plugin iri nyore inopa zvese zvinogoneka.
Elementor Pro - Iyo yemuno edhisheni yeWordPress ine yakawanda yekuda uye inogona kuwana yakanaka kunetsa. Elementor yasvika zera ine yakanakisa WYSIWYG mupepeti, mafomu, kusanganisa, marongero, matemplate, uye akawanda emamwe sarudzo pamwe nemazhinji plugins anoperekedza kuti awedzere. Handina chokwadi chekuti ndichazombovaka saiti pasina iyo!
Favorite WordPress plugins yekusimbisa Yako Yemukati uye Inosvika Kwayo
Yepamberi Tsika Yeminda - Ita kuti zvive nyore kune manejimendi, vanyori uye vapepeti kugadzirisa yako webhusaiti nekurerutsa ayo manejimendi. ACF iri nyore kuitisa uye inogadziriswa zvakanyanya. Tenga izvo zvinowedzerwa marezinesi ekuwedzera-ezvimwe zvinoshamisa zvinhu.
ARVE Yepamberi Inopindura Vhidhiyo Embedder - Akabatanidzwa mavhidhiyo anogona kunge ari hope dzekuchengetedza inoteerera marongero pane yako saiti. WordPress natively inosanganisa akawanda mapuratifomu, asi hazviite kuti vave vanoteerera.
Easy Social Shamwari Tsamba - Inokugonesa iwe kugovana, kuongorora uye kuwedzera yako yemagariro traffic neyakaurayiwa yekugadzirisa uye analytics features.
Nyore WP SMTP - Kutumira WordPress Notices, chenjedzo, uye otomatiki maemail kubva kuneako wekutambira mupi ari kukumbira dambudziko. Kushandisa SMTP kutumira email kuburikidza nemupi webasa rako ane mvumo kwakachengeteka zvakanyanya uye ichave nemukana wakakura wekuendeswa. Tine zvinyorwa zvinoratidza maitiro ekumisikidza izvi Google or Microsoft.
Feedpress - FeedPress inongobata yega redirections uye inogadziridza yako feed mune chaiyo-nguva yega nguva iwe paunoburitsa posvo nyowani.
OneSignal - nharembozha, webhu Push, email, uye in-app mameseji Zivisa vanyoreri nechero posvo rakaburitswa.
Podcast Feed Player Widget - Iyi iwijeti yandakagadzira iyo inozivikanwa. Kana iwe urikugamuchira podcast yako kumwe kunhu, iwe unogona kuisa iyo yekudya uye woisa yako podcast mune yako yepadivi bar kana kushandisa ipfupi kodhi mukati me peji kana kutumira. Iyo inoshandisa WordPress 'yemuno HTML odhiyo mutambi.
GTranslate - Shandisa iyi plugin uye sevhisi kushandura otomatiki zvemukati uye nekukwiridzira yako WordPress saiti yekutsvagisa kwekutsvaga kusvika.
Shambadzira kuApple News - Inogonesa yako WordPress blog zvemukati kuti ibudiswe kune yako Apple News chiteshi.
Recently - Wedzera widget kutsoka yako nezvako zvemazuva ano zvemukati kuti upe zvimwe zvakakura zvemukati zvinongedzo nekubatana. Iyi plugin ine toni yekugadzira yekugadzirisa sarudzo.
Dzokorora Zvekare Zvinyorwa - Sei uchingogovana zvemukati kamwe kana iwe uchigona kunge uchigovana zvemukati zvakadzokororwazve ... kutyaira kubatikana uye uchiona zvako zvemukati kudyara?
WordPress Yakakurumbira Mapositi - Wedzera wijeti kune tsoka yako nezvakanyanya kufarirwa zvemukati kuti urambe uchimhanyisa pane izvo zvinyorwa uye mapeji. Iyi plugin yakavakwa nemunyori mumwechete weazvino, uye ine mamwe ma templates akavakirwa akagadzirira kuenda futi!
WP PDF - Embed nharembozha-inoshamwaridzika maPDF zviri nyore muWordPress - uye kudzivirira vatariri vako kubva kurodha pasi kana kupurinda mafaera ako ekutanga.
WP Mushandisi Avatar - WordPress parizvino inongobvumidza iwe kushandisa tsika maavatat akaiswa kuburikidza Gravatar. WP Mushandisi Avatar inoita kuti iwe ushandise chero pikicha yakaiswa muMedia Library yako seavatar.
Favorite WordPress plugins yekukwiridzira Yako WordPress Saiti
Kraken Image Optimizer - Inogonesa mifananidzo nezvigunwe pane iyo nhunzi, ichigonesa iwe kudzikisa saizi yemufananidzo uye kutakura nguva pasina kurasikirwa nehunhu.
StackPath CDN - Budirira nekukurumidza peji rekutakura nguva, zvirinani Google chinzvimbo, uye nekumwe kushandurwa neStackPath CDN. Kugadzirisa kuri nyore uye kunongotora maminetsi.
WordPress SEO - Rank Math ndeye lightweight SEO Plugin iyo inosanganisira pa-peji zvemukati ongororo, XML sitemaps, akapfuma snippets, redirections, 404 yekutarisa, uye imwe ton maitiro. Iyo pro vhezheni ine inoshamisa rutsigiro rwevapfumi snippets, yakawanda-nzvimbo, uye zvimwe. Zvakanakisisa pane zvese, iyo kodhi yakanyatsonyorwa-yakanyorwa uye hainonoke nzvimbo yako zvakanyanya sevamwe WordPress SEO plugins.
WP Rocket - Gadzira WordPress mutoro nekukurumidza mune mashoma mashoma. Izvi zvinozivikanwa seyakanyanya caching plugin neWordPress Nyanzvi.
Favorite WordPress plugin yeCookie uye Data Kutevedzera
Sebhizimusi, unofanirwa kutevedzera mutemo wepasi rose, wehurumende, uye mamiriro anotonga maitiro aunoita uye ekuchengetedza data revashanyi vako. Ini ndanga ndichishandisa iyo Jetpack widget yemakuki mvumo, asi yaiwanzotakura kanopfuura kamwe uye yakanga isina sarudzo dzekugadzirisa.
GDPR Cookie Chibvumirano (CCPA Yakagadzirira) - Iyo GDPR Cookie Chibvumirano plugin ichakubatsira iwe mukuita yako webhusaiti GDPR (RGPD, DSVGO) kuenderana. Pamusoro pekutevedzera iyi GDPR WordPress plugin zvakare inotsigira kutevedzera kuki zvinoenderana ne LGPD yeBrazil neCalifornia Consumer Privacy Act (CCPA) inova mutemo wehurumende wakanangana nekusimudzira kodzero dzevamwe nekuchengetedzwa kwevatengi kuvagari veCalifornia.
Favorite WordPress plugins Kudzivirira Yako WordPress Saiti
Akismet - WordPress 'inonyanya kufarirwa plugin, Akismet ingangoita nzira yakanakisa pasi rose yekuchengetedza yako blog kubva kucomment uye trackback spam. Usangoisa chete, taura iwo majekiseni!
VaultPress - Chengetedza zvirimo zvako, madingindira, plugins, uye marongero ane chaiyo-nguva backup uye otomatiki kuchengetedza scanning.
WP Chiitiko Chiitiko -Iyo yakanyanya kuwanda yeWordPress chiitiko log plugin kuchengetedza rekodhi yekuchinja kwevashandisi, kurerutsira kugadzirisa matambudziko, uye kuona maitiro ekufungira nekukurumidza kuti adzivise hacks yakaipa. Kana iwe ukanyoresa ku Jetpack Security or Jetpack Professional iwe unowana yakazara Chiitiko Log zvakare.
Unoda Mamwe Mapulagi?
Kune mamwe akanakisa, akabhadharwa plugins anotsigirwa zvizere pa Themeforest iyo yausingawane kumwe kunhu. Iyo kambani yemubereki, Envato, inoita basa rakakura rekuona kuti plugins inotsigirwa uye inogadziridzwa kazhinji.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa dzakabatana macode pane ino posvo, ndapota tsigira chinyorwa changu nekudzvanya kuburikidza nekuvatenga!
Maitiro Ekusarudza A Framework Kune Wako Mutengi Personas
TaskHuman: Yechokwadi-Nguva Digital Sales Coaching Platform
Jan 5, 2015 na11:21 PM
Yakanaka runyorwa uye infographic. Semazuva ese, mamwe ekare, akajairika anofarira uye mamwe matsva ini ndichafanira kubuda! Ndatenda nekugovana.
Jan 6, 2015 na1:53 PM
Jun 28, 2015 pa 11: 34 PM
Ini handizive kuti ungati sei chero peji ino inoverengwa? Ndaifanira ku scroller nechepakati kuti ndiwane chimwe chinhu kuverenga uye ipapo chakanga chisina kukosha. Kana iwe uchifunga kuti 3/4 peji repadivi remabhatani ane mavara akajeka uye pop up iyo inoramba ichindigumbura kushambadzira kwebhizinesi, saka warasa. Ndangozvinetsa nekunyora izvi kuti ndikugoverane chimwe chinhu, sezvamakaita neni. Uye ndiko KUCHENGA kune CHASE. Ini pamwe chikoro chekare uye webhusaiti tekinoroji iri kufamba nekumhanya. Asi chokwadi kushambadzira kuchiri kwekuvaka mabhizinesi ekubatika uye kuunganidza ruzivo pane vakwikwidzi vako? Hazvizondishamise kana ruzhinji rwevaverengi vako vasina ruvara. Chokwadi ndiri kuenda nenzira iyoyo.
Jun 29, 2015 pa 12: 31 PM
Ndatenda nemhinduro, Steve. Isu tinopa zviri pano pasina muripo kwauri uye kuverenga kwedu kwakakwira kaviri-manhamba kwemakore akati wandei. Ndine chido chekuenderera mberi ndichishanda mugwara revateveri vedu, vashambadzi vedu, uye vatsigiri vedu. Shuwiro yakanakisa.
Jul 9, 2015 na9:48 PM
Hi Douglas! Inonakidza blog yaunayo pano. Rubatsiro rwakakura. Ndatenda.
Jul 10, 2015 na12:21 PM
Ndatenda! Uye unogamuchirwa!